Lamaane Xabsi 25 sanadood u galay Cunsuri-Naceyb ay ku kaceen! | Radio Himilo
Home / Macluumaad / Lamaane Xabsi 25 sanadood u galay Cunsuri-Naceyb ay ku kaceen!
Posted by: radio himilo May 29, 2017
Muqdisho – Lamaane da’yar oo Georgia ku nool ayaa ku dhex ooyay maxkamadda goortii lagu riday xukun 35-sano ah sababtii ay u galabsadeen danbi cunsuri-naceyb ah oo ay ku sameeyeen xaflad dhalasho oo uu dhiganayay wiil madow ah.
Norton waxay caddaysay inay ka qoomameysay falalkeedii maalintaas goortii mid kamid ehellada la dulmay oo ku sugnaa maxkamadda ay cafisay – iyada oo ku tiri; ‘Noloshu waxay ku yaraataa naceybka.’
Previous: Marka Dhibanuhu Cafiyo Midka Dhibaateeyey!